Cheshire Cat waa Afyare a isagoo 5 duntu oo ay la socdaan 40 paylines. sheeko caan Alice in Ihmemaa waa theme of Afyare. Mudanayaasha ee Afyare uu duud yahay iyo soundtrack ah waa mid ka mid ah nasteexo. muuqaallo kale ayaa si fudud waa fiican iyo dad badan oo muuqaalada bonus joogo in this tacabur cajiib sixir dhigi ciyaarta u xiiso badan. Kulankaan ayaa sidoo kale waxaa la ciyaari karaa naadi casino phone.
Shan Paylines Simple in this fudud naadi casino phone
Afyare wuxuu leeyahay duwan sharadka in kala duwan ka soo 40p in a £ 400 halkii Lataliyihii. Calaamooyinka muuqday on duntu ka mid ah Alice, March Hare ah, ka diir iyo Cat Cheshire ayaa sidoo kale ay la socdaan kaararka ciyaaraha- J, K, A iyo S, xaleef cake, iyo potions sixir.
Afyare wuxuu ku siinayaa 12.5 jeer saamiga haddii aad dalka 5 calaamadaha on hal payline a. The feature Super Mire Waqaf oo wax yaabahan ka kaas oo ciyaartoyda dhab ka faa'iidaysan karaan wax badan oo. In habkaani, mid ka mid ah calaamad lagu kala sooc lahayn doortay doonaa si ay u leexdo xagga calaamad super Mire Waqaf oo ku saabsan wareejin kasta.
Waxaa jira feature bonus la odhan jiray Free dhigeeysa Feature Bonus oo uu kiciyay markii ugu yaraan saddex calaamadaha bonus wheel dalka gal duntu ku. 3 iyaga siin doonaan shan dhigeeysa free, 4 iyaga siin doonaan toban dhigeeysa lacag la'aan ah iyo sidoo kale toban jeer saamiga guud. Haddii aad soo baxayso in nasiib si aad u hesho 5 oo iyaga ka mid, aad waxaa la guddoonsiin doonaa labaatan dhigeeysa free oo ay la socdaan qiimihiisu abaal-marin lacageed 50 jeer bet guud.
Ka hor inta suurta geliya habkaani, waxaa jira feature Wheel a kaas oo la ciyaaray ka hor bilowgii dhigeeysa free taasoo abaalmarino wilds on duntu la doortay aan kala sooc lahayn. Waxa kale oo aad ka heli kartaa 4 duntu duurjoogta ah in jeedin kartaa in ay aadka u bixinta.
Waxaa jira feature Guarantee Bonus ah in ay hubisaa in qiimihiisu ah guul ugu yaraan 10 jeer saamiga ku. Haddii aad ku guulaysato in ka yar, badiyeen is ilaa kaalinta doonaa. Furaha guusha weyn waa in isha ku duntu duurjoogta ah ee Free ka dhigeeysa Feature Bonus.
Iyada oo cadow laga bilaabo hooseeyo si dhexdhexaad ah, ciyaarta Afyare waxaa la ciyaari karaa dhammaan aaladaha ka mobile, qalabka kiniin iyo desktop. Well, ka naadi casino phone sidoo kale kulankaan. The design cartoon fudud si fiican u shaqeeya ciyaartoyda halka a track orchestral wanaagsan sidoo kale u ciyaara ee asalka ah. Dhufatey duntu of Afyare maanta laftiisa on naadi casino phone ama qalab kale oo la heli karo iyo Cat Cheshire ku keeno kadis farxad kuu.